Xaaladda Burtinle, Mid Abaareed iyo Mid Caafimaad – Radio Daljir
Abriil 22, 2017 3:54 g 0
Hayada wadaniga ah ee Tadaamun ayaa maanta deeq raashin ka qaybisay degmada Burtinle dadka ay raashinka u qaybisay ayaa ahaa kuwii abaartu xoolohoodii dhaafisay. Waxaa raashin qaybinta Idaacada Daljir uga warbixiyey gudoomiyaha ha’yada Tadaamun Cabdiraxmaan Cabdirisaaq Xaaji cRaxmaan.
Hadaladiisii waxaa ka mid ahaa
Dhan kale waxaa Idaacada Daljir halka xaaladda Burtinle marayso uga warbixiyey Caaqil Cabdiraxmaan Cabdullaahi Bootaan. Caaqilka ayaa sheegay in xaalada abaartu adagtahay uuna hada ku soo biiray cudurka shubanbiyoodka oo dad badan u dhinteen, kuwana u jiifaan. Caaqilka ayaa dadka soomaaliyeed ugu baaqay in ay iyagu is caawiyaan intii ay bini Aadam wax waydiisan lahaayeen oo ilaahay ha baryaan iskuna kalsoonaadaan.
Halkan ka dhegayso Caaqilka
Barnaamijka Ciyaaraha iyo Mustafe Xuseen Yuusuf